ओलीको मुख्य समस्या बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुनु हो - Ujyaalo Nepal
ओलीको मुख्य समस्या बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुनु हो
By ujyaalo	 On २८ पुष २०७७, मंगलवार ०८:१५ 55
नेपालीमा बोलेको भए अनुवाद गरेर सुनिरहने जाँगर गर्दैनथे, अंग्रेजीमा बोलेको भए भन्न खोजेजस्तै नभनिन सक्थ्यो । हिन्दी च्यानललाई हिन्दी अन्तर्वार्तामा प्रश्न उठाउनुपर्दैन ।
यतिबेला नै यस्तो इन्टरभ्यु कुन उद्देश्यले र कसरी आयो भन्ने प्रश्न पनि ठूलो होइन । भोलि ओली रहलान् या नरहलान्, तर त्यति बेला पनि जी-न्युजको अर्काइभमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता रहन्छ । त्यति बेला कन्टेन्टकै अर्थ हुने हो ।
काम-अनुसार र मुद्दाअनुसार विरोध गर्यो भने अर्थ रहन्छ ! किनकि त्यसमा सुधार या राम्रो भइदिए भन्ने आशा हुन्छ । तर विरोध गर्नैपर्ने दायित्वतिर लागियो भने अन्य जेनुइन विरोध पनि पनेलो हुन्छ । ओलीको मुख्य समस्या बोली र व्यवहारबीच तालमेल नहुनु हो । भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिन भन्ने तर गोकुलहरूलाई सामान्य छानबिनसमेत हुन नदिने प्रवृत्तिको हो ।
एउटा अन्तर्वार्ता न हो । मन नलागे चुप बसौं, तर अनेक अन्ट-सन्ट कथा बुनेर खेदो नखनौं । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको अन्तर्वार्ता ओलीको होइन, देशको प्रधानमन्त्रीको हो !
प्रकाशित: २८ पुष २०७७, मंगलवार ०८:१५